ကားငှားရမ်းမှုရှာဖွေရေးအင်ဂျင် - သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာသင့်ကားလား။
သင်အငှားကားလိုပါသလား? ထိုအခါသင်ရှာနေသည့်စာမျက်နှာသို့ရောက်သည်။ ငါတို့သုံးပါ ကားငှားရမ်းရှာသူ နှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအာမခံချက်နှင့်အတူတ ဦး တည်းကိုရယူပါ။
ဒီလိုင်းများအထက် သင့်ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် အာမခံအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရွေး။ ရသောနေရာကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ကြိုတင်ကောက်ယူပြီးပြန်လာမည့်ရက်ကိုအမှတ်အသားပြုပြီးသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌အကောင်းဆုံးအငှားကားတစ်စီးပါလိမ့်မည်။
7 တစ် ဦး ချင်းစီအကြားကားငှားရမ်းခြင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်သည့်အခါမကြာခဏပေါ်ပေါက်လေ့ရှိသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအနက်မှတစ်ခုမှာအထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်အကြီးစားဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌သြဇာညောင်းသောသူများဖြစ်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ရှုပ်ထွေးမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် သို့မဟုတ်အခြားမြို့များသို့သွားရောက်လည်ပတ်သည်။
လူအများသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုခြင်းသည်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်လွတ်လပ်မှုအချိန်ဇယားများအရမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်တွင်တိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ရွေ့လျားခြင်းသည်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ၊ ကားငှားရမ်းခြင်း.
အစပိုင်းတွင်ကားငှားရမ်းခြင်းသည်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားနှင့်လည်းထပ်တူထပ်မျှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပြီးရင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်ဆိုတာရှင်းပြပြီးကူညီပေးတယ်။ တဖန်သင်တို့စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းရချင်တယ်ဆိုရင် သင်ရုံကလစ်နှိပ်ပါရန်ရှိသည်.
ချွေတာကားတစ်စီးကိုငှားရမ်းတာကအဆင့်မြင့်ကားမဟုတ်ရင်ငှားရမ်းခဟာတစ်ရက်ကိုယူရို ၅ မှယူရို ၁၅ ဒေါ်လာကြားမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီပမာဏကအများကြီးပိုများလိမ့်မယ်။
လတ်တလောတွင်ကွန်ယက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံရန်ဖြစ်နိုင်သည့်ယာဉ်များကိုငှားရမ်းရန်ရည်ရွယ်သည့်ကုမ္ပဏီအမြောက်အများကိုတွေ့ရသည် လုံးဝအွန်လိုင်း။ သို့သော်ဤအရာသည်ဤတွင်မပြီးပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြသရန်ဤကဏ္sectorတွင်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းခွဲများအကြားခြေရာခံသည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောကွဲပြားသော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများ.
RentalCars သည်စျေးအသက်သာဆုံးနှုန်းဖြင့်ရှာဖွေရန်ကားငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် သင်ဒီမှာနှိပ်ပါ, ဒေတာအားလုံးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင်၏ငှားရမ်းကားကိုကြိုတင်ယူထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Budget ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ အထူးသဖြင့် Los Angeles မြို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မိသားစုငှားရမ်းကား ၁၀ စီးသာရှိသောမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ယနေ့တွင်၎င်းသည်စုစုပေါင်းအပြင်၌ကားများ၊ ထရပ်ကားများနှင့်ဗင်ကားအမျိုးမျိုးရှိသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၈ နိုင်ငံတွင်ရုံးခန်းပေါင်း ၃၄၀၀ ဖွင့်လှစ်ထားသည်.
အထူးပြုကုမ္ပဏီတစ်ခု ဥရောပမှာကားငှားရမ်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဖောက်သည်ခြောက်သန်းကျော်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရရှိကြသည်။ သင်ဤ link ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Six.es သည်စပိန်တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံတွင်ကားငှားရမ်းခြင်းအတွက်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုမှာ သင် 10% လျှော့စျေးနှင့်အတူစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် AbsolutViajes ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီမှာနှိပ်ပါ။ ဒီအခွင့်အရေးကိုသင်လက်လွတ်မလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်အပလီကေးရှင်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည့် KAYAK သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစံပြခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဝဘ်စာမျက်နှာများအကြားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှိုင်းယှဉ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း, ငါတို့ကိုလည်းငါတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအငှားကားရှာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကမ်းလှမ်း။
လူတစ်ယောက်စီမှာသူတို့ရဲ့အရသာရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် Avis ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြီးမားသောစင်းကို အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး - ရိုးရှင်းသောကားများမှအစွမ်းထက်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများအထိ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်အထူးလျှော့စျေးအမျိုးမျိုးပေးသည်။ စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းထားထားဖို့ရွေးစရာတခုရှိတယ် ယခုတွင်သင်သည် ၂ ရက်စျေးနှုန်းဖြင့် ၃ ရက်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသောကားငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများအကြားစျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်ဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ထိုစစ်ဆင်ရေးသည်အမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
သူတို့ထဲမှာငါတို့ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမည့်မတူညီသော box များနှင့် options များပါသော screen ကိုပြလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာကားကိုကောက်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောနေရာကိုညွှန်ပြရမည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတူတူပင်၏ကောက်ခံခြင်းနှင့်ပေးပို့၏ရက်စွဲများဖော်ပြလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကားအမျိုးအစားနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်လိုသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာအသုံးပြုသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရမည်။ သို့သော်အထက်တွင်ကိုးကားထားသောဤလိုအပ်ချက်များမှာရှာဖွေရေးပုံစံများတွင်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရပေါ်လာပြီး၎င်းတို့သည်ရှင်းပြသည့်အတိုင်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအများစုသည်ကားမှတဆင့်ကားငှားရမ်းရန်ခွင့်ပြုရန်အလွန်တွန့်ဆုတ်ကြသည် ငွေသားပေးချေမှု, ဒါပေမယ့်လိုအပ်သည် ခရက်ဒစ်ကဒ် ကက။ ထို့ကြောင့်၊ ဤကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးမျိုးမရှိဘဲအငှားကားတစ်စီးရရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
လက်ထဲမှာငွေကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းပြချက်ကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ကားများသည်စျေးကြီးပြီးထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲ။ အထူးသဖြင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အလွန်ဈေးကြီးသောပြုပြင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ကားများသည်ဖောက်သည်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုခံရမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုမတွေ့ပါကစီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းမရှိစေရန်၎င်းတို့အားလျှော့ချရန်ကြိုးစားရမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့ဖန်တီးကြသည် အာမခံ ယာဉ်ငှားရမ်းတွဲ။
ဤအာမခံများအားငွေသွင်းခြင်းဖြင့်ငွေအပ်နှံထားပါသည်။ လိုအပ်လျှင်လိုအပ်လျှင် (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ထိုးနှက်ခြင်း) ဖောက်သည်မှထည့် ၀ င်ပါလိမ့်မည်။ အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားဖြင့်ဤငွေသွင်းခြင်းအမျိုးအစားကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ကားပို့ပြီးသည့်အခါရရှိနိုင်သောလက်ကျန်ငွေပမာဏကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။
ဒီဘ ၀ မှာအရာအားလုံးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှဒီအခြေအနေကနည်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မြို့ကြီးများစွာတွင်ငွေပေးချေမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားများကိုငှားရန်ဆန္ဒရှိသောကုမ္ပဏီများရှိသည်။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော်လည်း AutoEurope ကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်အချို့ရှိနှင့်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအကြားကားငှားရမ်းခြင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
မကြာသေးမီကကားငှားရမ်းမှုသည်တော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေကိုမပူဇော်ပေမယ့်တစ် ဦး ချင်းစီကလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာပိုပိုပြီးများလာတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ရန် (သို့) အမြတ်အစွန်းရရန်စိတ်ဝင်စားသောလူများဖြစ်သည် သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေရောင်းကြတယ် အသုံးပြုသူများကသူတို့ကိုရရှိနိုင်စေရန်။
ကားကိုအမြဲနှင့်အတူပြန်ရောက်ခံရဖို့ရှိပါတယ် လောင်စာဆီအပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့ ပိုင်ရှင်နှင့်ငှားရမ်းသူသည်ယာဉ်၏အခြေအနေနှင့်ပျက်စီးမှုနှင့်ပျက်စီးခြင်းများကိုမတွေ့ရှိရန် (၎င်းသည်ပေးပို့သည့်အချိန်ကကဲ့သို့) ယာဉ်၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ။
အပိုပိုက်ဆံရရန်ရှာကြံသောလူအများစုကပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်ပဏာမခြေလှမ်း။
အစအ ဦး ၌၎င်းဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းများတွင်မေးခွန်းထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်သံသယအချို့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးကိုဖတ်ပြီး။ ဤမေးခွန်းများအားလုံးဖြေကြားခံရပြီးသံသယများပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။